चीनले उत्तर कोरियालाई गोप्य रुपमा तेल बेचेको ट्रम्पको आरोप
पुस १,काठमाडौ । अमेरिकाले चीनमाथि गोप्य रुपमा उत्तर कोरियालाई तेल निर्यात गर्ने गरेको आरोप लगाएको छ ।
अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्पले चीनको यस्तो गतिविधले आफूलाई निकै निराश बनाएको बताउनुभएको छ । ट्रम्पले ट्वीट गर्दै उत्तर कोरियाका लागि पेट्रोलियम पदार्थ निर्यात गरिएको बेला चीनलाई रंगे हात समातेको दावी गर्नुभएको छ । ट्रम्पले उत्तर कोरियालाई तेल निर्यात नरोके कोरिया संकट कहिल्यै समाधान नहुने दावी पनि गरेको बीबीसीले जनाएको छ ।
अमेरिका जाने सोचदै हुनुहुन्छ भने "कानुनि रुपमा अमेरिका जाने बाटाहरु" पुरा पढ़नुस
अब DV परेर अमेरिका जान २०१८ मा पाइने कि नपाइने ? तर हेर्नुस २०१९ बाट DV खुल्छ कि खुल्दैन आखिरमा के छ त डोनाल ट्रंप को नीति ?
डोनाल्ड ट्रम्पले आज कार्यभार सम्हाल्दै
भारतमा रेल दुर्घटनामा परी मृत्यु हुनेको संख्या १ सय २८ पुग्यो
भारतमा रेल दुर्घटना : ९६ जनाको मृत्यु
राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपतिमा निर्वाचित ट्रम्पलाइ बधाई
अमेरिकाको ४५ औं राष्ट्रपतिमा डोनाल्ड ट्रम्प विजयी
अमेरिकामा आज निर्वाचन : राष्ट्रपति क्लिन्टन अथवा ट्रम्प ?
चुनावी परिणाम स्वीकार नगर्ने ट्रम्पको भनाई खतरनाक : ओवामा
इराकको दोश्रो ठुलो मोसुल सहर नियन्त्रणमा लिन सैन्य कारबाही